OEM carbon steel milling ulo oru machining akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Carbon ígwè CNC egwe ọka nwere a dịgasị iche iche nke ngwa na adabara ọtụtụ n'ibu akụkụ. CNC lathes nwere ike hazie mgbagwoju adiana ahu shapes. Maka akụkụ igwe na-egwe ihe, a na-edozi oghere ahụ, a na-eji akwa igwe na-agba ọsọ ọsọ na-agagharị oghere na oghere iji belata ụdị na atụmatụ ndị achọrọ. Igwe ihe na-egwe nri na-adaba adaba maka ụdị ụdị ọrụ dịka akụkụ akụkụ na ngwaọrụ ndị na-agagharị agagharị. Curved akụkụ na n'ọtụtụ ebe, na ulo oru ubi, dị ka tobaim pupụtara, ụgbọ mmiri propellers, ulo oru ngwaahịa na cylindrical na conical na-ebupụta, wdg Ouzhan na-ahaziri carbon ígwè-egwe ọka akụkụ machining ọrụ maka kpọrọ ahịa.
Igwe carbon dị ala, ọkara carbon nchara, elu carbon nchara, gbanwere nchara na-enweghị ihe ọ bụla, megharia ma degharịa phosphorus, na ndị na-abụghị sulfide dị elu nke manganese (ọdịnaya manganese karịa 1%)
Enwere ike ịhazi elu nke carbon nchara dị ka ihe ị chọrọ, dị ka ọgbụgba ọkụ ọgbụgba, ikpo ọkụ, mmiri dị elu, na-atụtụ na ihe ndị ọzọ.
Nga ọgwụgwọ → passivation (dị ka usoro ụkpụrụ) lus flushing (mmiri oyi ma ọ bụ mmiri ọkụ flushing) → neutralization → ihicha ọgwụgwọ
Site na ngwunye gaa na nkwakọ ngwaahịa, usoro niile nke ịhazi igwe igwe na-achịkwa.
Ejiri ya na ụlọ ọrụ dị arọ, ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ dị mkpa kwa ụbọchị, mma ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Nabata CAD akpaka, JPEG, PDF, STP, IGS na ọtụtụ faịlụ faịlụ ndị ọzọ
Nke gara aga: Ahaziri carbon ígwè-egwe ọka akụkụ nhazi igwe akụkụ
Osote: CNC-egwe ọka plastic akụkụ